‘सडक खाना महोत्सव पर्यटन प्रवद्र्धनकै लागि हो’ – Dainik Lumbini
‘सडक खाना महोत्सव पर्यटन प्रवद्र्धनकै लागि हो’
अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा होटल तथा रेष्टुरेण्ट व्यवसायी संघ रुपन्देहीले सोमबारदेखि सडक खाना महोत्सवको आयोजना गर्दैछ । विगतमा एक दिन मात्र सडक खाना महोत्सव यस पटक भने तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । ‘अतिथि देवो भव,पर्यटकको स्वागत सत्कार हाम्रो सान, पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास हाम्रो अभियान, सडकमै खाऔं सडकमै नाचौं ,सडकमै रमाऔं भन्ने नाराका साथ महोत्सव सञ्चालन हुँदैछ । खाना महोत्सवको तयारी, महोत्सवले पर्यटनमा पार्ने प्रभावलगायतका विविध विषयमा आयोजक संघका अध्यक्ष समुन्द्र जिसीसँग लुम्बिनीकर्मी डी. आर. बन्जाडेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश…
सडक खाना महोत्सवको दोस्रो संस्करण आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ ? कसरी हुँदैछ खाना महोत्सव ?
हामी पहिलो सडक खाना महोत्सवबाट धेरै अनुभव लिएर दोस्रो संस्करणका रुपमा सडक खाना महोत्सव आयोजना गर्दैछौँ । नेपाल सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मनाउँदैछ । प्रदेश सरकारले पनि लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मनाईरहेको छ । त्यसको पृष्ठभूमिमा हुने तीन दिने सडक खाना महोत्सवले वास्तवमै पर्यटनको क्षेत्रमा सकारात्मक र निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा विश्वास गरेका छौँ ।
महोत्सवका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । जिल्ला जिल्लामा समेत पुगेर हामीले प्रचारको काम समेत गरिसकेका छौँ । स्थानीय तहमा पनि विभिन्न मिडियाहरुमार्फत प्रचारका काम भैरहेका छन् । सडक खाना महोत्सव हुने स्थान कालिका पदमा हाल सडक निर्माणको काम भैरहेकाले पनि महोत्सवलाई अवरोध नहोस् भनेर सडक सम्माउने, रोलीङ गर्ने, स्टलहरु निर्माणलगायतका काम सकिएका छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले नेपाल आर्मीलागायतका संघ संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा बृहत सरसफाई समेत गरेका छौँ । तीन दिनसम्म विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, झाँकी, मनोरन्जनयुक्त कार्यक्रम गरी हामी सडक खाना महोत्सव मनाउँदै छौँ ।
सडक खाना महोत्सव विगतभन्दा के र कस्तो फरक हुनेछ ? नयाँ केही गर्दै हुनुहुन्छ ?
हजुर, हामी पहिलो वर्ष गर्दा अनुभव थिएन तर अहिले हामी अनुभवले पनि हाम्रा हरेक क्रियाकलापहरु परिस्कृत र नयाँ हुनेछन् । हाम्रो व्यवस्थापनको पक्ष नै नयाँ र आधुनिक हुनेछ । हरेक स्टलहरुमा हामी व्यवस्थापनको पाटोलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने योजनामा छौँ । विभिन्न समितिहरु नै निर्माण गरेर काम गरिने हुँदा हामी यस पटकको सडक खाना महोत्सव विगतको भन्दा राम्रो हुनेमा आशावादी पनि छौँ । हामीले खाना महोत्सवकै हिसाबले बुटवललाई परिचित गराउने गरी काम गर्न खोजिरहेका छौँ ।
विगतभन्दा हाम्रा साउन्ड सीट्महरु फरक हुनेछन् । खानपान, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु, कलाकारहरु आदिले पनि विगतभन्दा फरक होला भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यस आसपासमा चर्चामा रहेको सुजता खिरलाई हामी विषेश परिकारका रुपमा पनि स्टलमा राख्ने छौँ त्यो पनि हाम्रो नयाँ विषेशताका रुपमा हुनेछ । समग्रमा एक दिनको भन्दा तीन दिनका लागि आयोजना गरिएको सडक खाना महोत्सव राम्रो र विगतभन्दा फरक हुनेछ ।
खाना भन्नासाथ स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो । स्वास्थमैत्री सडक खाना महोत्सव बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हाम्रो व्यवसाय नै मानवीय स्वास्थसँग जोडिएको व्यवसाय हो । त्यसले गर्दा पनि हामी हरेक पल पलमा खानाको गुणस्तरमा सचेत हुन्छौँ नै । सडक खाना महोत्सवमा पनि गुणस्तरलाई हामी विषेश जोड दिएका छौँ । ‘हाइजिनिक फुट’ र सफा खाना नै हाम्रो प्रतिबद्धता हो । त्यसमा हामी कुनै कम्परमाइज गर्दैनौं । अब सडक निर्माणको क्रममा धुलो नहोस् भन्नका लागि सरसफाई, कार्पेट विछ्याउने जस्ता कामहरु हुने हुँदा खानामा कुनै समस्या हुनेछैन् । हाम्रा प्रायः परिकारहरु होटलहरुमा नै निर्माण हुनेछन् र सडकमा रहेका स्टलहरुमा व्यवस्थित रुपमा राखिनेछ ।
हामी खानाको गुणस्तर जाँचका लागि विभिन्न निकायहरुको समन्वयमा चेकजाँच पनि गर्ने गरी संयन्त्र बनाएका छाँै । सडकमा राखीने खानाका डिसहरु व्यवस्थित र ढाकीएको अवस्थामा व्यवसायीसाथीहरुले राख्नुहुनेछ । हामी यो सन्देश पनि दिन खोजिरहेका छौँ की बुटवलमा सफा र गुणस्तरयुक्त खाना पाइन्छ । खाध्य तथा गुण नियन्त्रण महाशाखा, उपभोत्ता हित संरक्षण मञ्च तथा पत्रकारहरुले स्टलहरुको निरीक्षण अनुगमन गर्नेछन् । त्यस कारणले पनि गुणस्तरमा कुनै संझौता नहुने प्रष्ट पार्न चाहान्छु ।
यहाँहरुले संचालन गर्ने सडक खाना महोत्सव रातिको समयमा हुनेहुँदा सुरक्षा चुनौति पनि मुख्य रुपमा आउँछ । सुरक्षाको लागि कस्तो प्रवन्ध गर्नुभएको छ ?
सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय हो । सुरक्षाका विषयमा हामी निकै नै गंभीर पनि छौँ । सुरक्षाको गांभिर्यतालाई हेरेर नेपाल सरकारका तीन वटै संयन्त्र नेपाल आर्मी, सशस्त्र प्रहरी बल, जनपदसँग समन्वय गरेका छौँ । त्यति मात्र होइन हामी होटलहरुमा कार्यरत सुरक्षा वललाई पनि परिचालन गर्नेछौँ । सुरक्षालाई नै मध्यनजर गरेर प्रविधिमा पनि जोड दिएका छौँ । हामीले सम्पूर्ण गतिविधिलाई सिसिटिभिबाट निगरानी गर्ने तयारीका साथ काम गरिरहेका छाँै । हाम्रा साथीहरु त्यही अनुरुप लागीरहनु भएको छ । त्यसकारण दर्शकहरुलाई ढुक्कताका साथ सडक खाना महोत्सवमा सहभागी हुन अनुरोध समेत गर्दछु ।
आन्तरिक पर्यटनका लागि यस प्रकारका कार्यक्रमहरुले सहयोगी भूमिका पनि खेलेको हुन्छ । यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट के–कस्ता सहयोगहरु पाउनु भएको छ ?
हजुर, मेला महोत्सवहरु पर्यटन पर्वद्धनका लागि प्रचारात्मक सामग्रीका रुपमा हुने गर्दछन् । यी र यस्ता कार्यक्रमहरुले नै प्रचारको काम गरेका हुन्छन् । यस प्रकारका गतिविधिहरुले आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक भित्राउन भूमिका खेल्ने कुरामा दुईमत नै छैन् ।
हामीलाई सडक खाना महोत्सवको दोस्रो संस्करण संचालनका लागि सबै निकाय, संघ संस्थाहरुको उत्प्रेरणले उत्साहित बनाएको छ । अझ भन्नु पर्दा हामीलाई स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबाट पनि ठूलो सहयोग भएको छ । खाना महोत्सवलाई प्रदेश ५ सरकारले नै बढी महत्व दिएको छ । मुख्य मन्त्री नै प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी हुने कार्यक्रम पनि छ । प्रदेश सरकारबाट भिजिट लुम्बिनीकै कार्यक्रम अन्तरगत केही रकम प्रदान गर्ने सहमति पनि भएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि विषेश सहयोग गरेको छ । यस सडक खाना महात्सवको संरक्षकको रुपमा प्रदेश सरकार रहेको छ, भने बुटवल उपमहानगरपालिका प्रवद्र्धकका रुपमा रहेको छ । साथै यसै क्षेत्रमा रहेको तिलोत्तमा, देवदह, सैनामैनालगायतका स्थानीय तहहरुको पनि सहकार्य छ । विषेश गरी बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ९, यहाँका टोल समितिहरु, आमा समूहहरु तथा वडा अध्यक्ष स्वयमको विषेश सहयोग रहेको छ ।
खाना महोत्सवमा कति स्टलहरु छन् ? कति दर्शकहरुको सहभागिता होला ? कति कारोबार होला केही आकलन गर्नुभएको छ ?
विगतमा ६० वटा स्टल थिए । एक दिन मात्रै संचालन गरेका थियौँ । दर्शकहरुको उलेख्य सहभागिता र उत्साहले हामीलाई थप प्रेरण दियो र यस वर्ष झन्डै दोब्बर स्टलका साथमा तीन दिनसम्म सञ्चालन गर्दैछाँै । दर्शकहरुको उत्साह र मनोरञ्जनलाई मध्यनजर गरेर हामीले नयाँ शैलीमा भव्य रुपमा सडक खाना महोत्सव गर्दै छाँै । हामी आफै नै गाडी लिएर जिल्ला जिल्लाहरुमा प्राचार प्रसारमा लागेका कारणले पनि यस पटक धेरै पर्यटकहरु आउने अपेक्ष गरेका छौँ । तीन दिनको अवधिमा २ लाख दर्शकले सडक खाना महोत्सवको अवलोकन गर्ने लक्ष्य लिएका छ, भने पाँच करोड बढीको कारोबार हुने अपेक्षा गरेका छाँै ।
हामी बुटवलमा दोस्रो चरणको खाना महोत्सव गर्दैछाँै । यस क्षेत्रका लागि यो गर्वको विषय हो । यसको सफलता नै हामी सबैको सफलता हो । यस पटकको सडक खाना महोत्सवमा लाइटिङ, साउन्ड स्टम, स्टलको व्यवस्थापन, सांस्कृतिक कार्यक्रमलागाएतका विविध पक्षहरुले आक्रसक हुनेछ । सम्पूर्ण मानुभावहरुमा सडक महोत्सवमा सहभागी भै आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गरौँ भन्न चाहान्छु । यहाँहरु आउनुहोस् सडक मै खाउँ, सडक मै रमाउँ । धन्यावाद
‘ चार वर्षभित्र पाँच अर्बको आयात प्रतिस्थापन गछौं’